ANC Yotumira Nhumwa kuZimbabwe Kunotaura neZanu PF Pamwe neMamwe Mapato
South Africa New Leader Cyril Ramaphosa
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dziri kutambira nenzira dzakasiyana siyana danho rakatorwa nebato riri kutonga muSouth Africa, reAfrican National Congress rekutuma nhumwa dzaro kuZimbabwe kunotsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko ari munyika iyi.
Izvi zvinotevera mashoko aziviswa nemutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, mushure memusangano mukuru webato ravo wakaitwa neMuvhuro, uyo wakabuda nechisungo chekuti bato ravo ribatsire muhurukuro dzekutsvaga runyararo muZimbabwe.
VaRamaphosa vaudzawo vatori venhau kuti bato ravo reANC rakawirirana kuti paitwe nhaurirano pakati peZanu PF neANC senzira yekutsvaga nzira dzekubatsira kugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe, uye ANC ichataurawo nemamwe masangano ari muZimbabwe.
Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika, VaMasimba Kuchera, vati havaoni hurukuro idzi dzichifamba zvakanaka sezvinotarisirwa neveruzhinji muZimbabwe kana mapato ari kutonga muSouth Africa neZimbabwe kana ari iwo ari kuiswa pamberi penhaurirano idzi.
VaKuchera vati bato reZanuPF rinofanira kutanga rabvuma kuti munyika mune matambudziko anoda kugadziriswa kwete naiyo chete, asi kuti nemamwe mapato anoipikisa pamwe nemasangano akazvimirira ari munyika.
Imwe nyanzvi inodzidzisa paTswane University of Technology, VaRick Mukonza, vatiwo havaone hurukuro idzi dzichibudirira kana dzisingaise pamberi zvido zvemapato anopikisa muZimbabwe .
Chipangamazano musangano re Political Economy of South Africa, VaGedion Chitanga, vatiwo kana dambudziko riri muZimbabwe risina kugadziriswa nekuchimbidza, zvichaita kuti vanhu vakawanda vemuZimbabwe varambe vachitsvaga hupoteri muSouth Africa, nedzimwe nyika dzakapoteredza nyika iyi.
Asi mutauriri weZanu PF muSouth Africa,VaKennedy Mandaza, vati ichokwadi kuti Zimbabwe ine matambudziko, naizvozvo yakazvipira kuita hurukuro nemunhu wese.
Asi VaMandaza varamba mashoko ekuti hurumende yeZanu PF iri kutyora kodzero dzevanhu munyika.
Mwedzi wapera, Va Ramaphosa vakatumira nhumwa nhatu kuZimbabwe dzinoti VaSydney Mufamadi, Amai Baleka Mbete naVa Ngoako Ramatlhodi, idzo dzakasangana chete nehurumende yaVaMnangagwa, dzikadzokera kuSouth Africa dzisina kuita hurukuro nevatungamiriri vemapato anopikisa hurumende, kusanganisirawo masangano akazvimirira.